Modely No .: HL461
Head Material: Aluminum firaka
Head Size: 460 * 230mm
Vokatra: 300000pcs isam-bolana
Ny tsipika Richina dia natao ho an'ny mpanjifa izay manantena lafin-javatra faran'izay tsara sy mateza. Izany Aluminum Snow Pusher dia maivana dia mampisava be dia be ny oram-panala amin'ny tsirairay izany. ny Aluminum Snow Pusher dia fitaovana matanjaka ho an'ny iray miavaka sarobidy. Zava-nisongadina, Aluminum Snow Pusher vary lafiny: 460 * 230mm, Blade Material Aluminum, Aluminum Snow Pusher ankapobeny dia 1300mm halavany. Raha tianao izany Aluminum Snow Pusher mba mendrika ho namany Sary mba afaka feno azy ireo tsirairay avy amin'ny baoritra.
Maharitra Aluminum Snow sahiratsy , amin'ny ankapobeny lavany 1300mm
Snow lapelina aluminium lelan-tsabatra, habe 460 * 230mm
oram-panala amin'ny vovoka angady vy mifono tahony
Vary ary mitana mifandray amin'ny screws
Mitady tsara Aluminum Snow Pusher Manufacturer & mpamatsy? Manana fantina malalaka amin'ny vidiny lehibe mba hanampiana anao hahazo famoronana. Ny Aluminum Snow sahiratsy dia azo antoka tsara. Origin China izahay Factory ny Mail Order Pusher Snow. Raha toa ka manana fanontaniana, Aza misalasala mifandray aminay.
Aluminum Hazavao Amin'ny Snow angadin'omby
Garden Fitaovana Snow angadin'omby
Heavy-Adidy Snow borosy
Snow borosy Fa Car
Snow borosy Ice Scraper
Snow borosy Miaraka Ice Scraper
Snow borosy Miaraka Scraper
Snow Cleaning fitaovana Car
Snow Removal borosy
Snow Removal Fitaovana
Snow taorian'ny voina
Poly Snow Pusher amin'ny Long Wood tahony
Telescopic lapelina Light Weight Portable Snow Sh ...
Sisin-dalana rehetra Steel Snow Scraper amin'ny Heavy Adidy
Heavy Adidy sisin-dalana Ice Chopper / Scraper